GSM, WCDMA, CDMA, MEC (အင်တာနက် Setting များ) | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
TZ သတင်းစုံ.apk လေးပါ
TZ သတင်းစုံ.apk လေးနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘယ်သူထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး တော်တော်လေးကို စုံစုံလင်လင်ဖြစ်တာတော့ တွေ့ရတယ် မုဘိုင်းန...
Huawei C8815 imei ပျောက် Sim Card မသိ 1x error 3G မတက် build number ပြန်ဆင်းစရာမလို တဲ.bat Tools
Huawei C8815 imei ပျောက် Sim Card မသိ 1x error 3G မတက် build number ပြန်ဆင်းစရာမလို ဘာလာလာဒေါင်းဒယ်ဗျာ ဘာမှ ဖုန်းserviceတက်စရာမလိုဘူး လက်ညှိ...
Samsung ဖုန်းတွေအတွက်လိုအပ်သည့် Update Firmware များကိုအတိအကျရှာပေးနိုင်သည့် ( Android Application )
>>> Download Here! <<< Naung Yo Facebook စာမျက်နှာမှ
C8815 Invalid Sim error ကို ရှင်းလိုက်ရအောင်
Sim error ကိုရှင်းရတာ ခေါင်းကိုက်နေတဲ့ကိုကိုမမတွေအတွက်နော် Vroot လေးနဲ့တော့အရင် root လိုက်အုံးဗျ ပီးရင်ကြိုးထိုး ကလစ်ခေါက်......... ပြီးရင...
Gmail Account ပျက်သွားလို့၊ Password မေ့သွားလို့၊ Lock ကျသွားလို့ =>> Recovery ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်။
Gmail Account ပျက်သွားလို့၊ Password မေ့သွားလို့၊ Lock ကျသွားလို့ =>> Recovery ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်။ သိပြီးသားသူတွေအတွက်တော့ အသေးအဖွဲလေြး...
ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အခြား ဗဟုသုတတွေကို Software တစ်ခုတည်းနဲ့ အကုန်ဖတ်နိုင်မယ်.
ဒီကောင်လေးကတော့ Windows PC သမားတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်.. 3.38 MB ရှိတဲ့ exe ဖိုင်လေး တစ်ဖိုင်နဲ့ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်း၊ အခြား IT Knowledge တွေကို ...
Myanmar Hot Sites.apk ရှယ်လေးနော် :D
ဒီကောင်လေးကတော့ ကျားစာလေးပါ လိုအပ်ရင်တော့ ဒေါင်းသွားကြပေါ့. :D >>> Download Here! <<<
Huawei ဖုန်းများတွင်အဖြစ်များလေ့ရှိသည့် SIM Invaid , 3G Error, 1x Error, IMEI Error ဖြေရှင်းပေးမည့် Tool
Huawei ဖုန်းများတွင်အဖြစ်များလေ့ရှိသည့် SIM Invaid , 3G Error, 1x Error, IMEI Error ဖြေရှင်းပေးမည့် Tool Password ခံထားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း ...
Wifi Password သိချင်လား
အကောင့်နှင့် ပက်စ်ဝပ်များ ခိုးယူသော Bill stoppe Ad...
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဆိုက်တွေကို ထည့်သွင်းပြီးတော့ ဖတ်...
အချိန်မှတ်ပြီးAuto ဖုန်းခေါ်ခိုင်းမယ့် Call Schedul...
Google Nexus5Tool One Click Root ,One Click Boo...
မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် MP-3 သီချင်းလေးတွေကို Apk လေးလ...
Huawei Y516 (Y516-T00, Android 4.2, V100R001CHSC01...
Galaxy S SL (GT-I9003) Thailand
ကွန်ပျူတာရဲ့ Local Disk (C:) (D:)စသည်တွေမှာ မိမိစိ...
Computer ကsleep မဟုတ်ပဲလုံးဝပိတ်သွားတာမျိုးလား
C8816,C8816D Unlock Bootloader,Auto Root & Myanmar...
HTC One (M8) ကို Root လုပ်နည်း
Facebook ကဲ့သို့ လူမှုကွန်ယက်ကို မြန်မာပြည်က မြန်မာ...
Samsung Galaxy S5 ကို Root လုပ်နည်
Easy HTC Bootloader Unlock [ No Need Unlock Code ]...
Rar, Zip Password Recovery Pro 4.54.48 with Serial...
Huawei U8818 ကို root လုပ်နည်း
HuaweiY600_U00 ကို Rootမယ်။ Gapps သွင်းမယ်။
Samsung ဖုန်းများ THL Firmware ကိုမတင်ပဲ မြန်မာစာက...
Facebook ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဖုန်းနဲ့ Verify လုပ်နည်း...
Huawei C8816D အတွက် Theme Font လေးပါ
Android အတွက် စွယ်စုံသုံး - System Tuner Pro v3.0....
ဖုန်းကို Remote Control အဖြစ်သုံးလို့ရစေမယ့် Smart...
Samsung secret codes ကုတ်များ
Android Magazine app Maker လေးနဲ့ Apk လေးတွေဖန်တီး...
GSM, WCDMA, CDMA, MEC (အင်တာနက် Setting များ)
Android App စတင်​​ရေးသားခြင်း
Smart Box Android Appcation
Offline Browser လေးပါ
Android Application များရေးသားနည်း
G510 - Schematic Diagram ( Hardware ညီကိုတော်များအ...
Huawei ဖုန်းများတွင်အဖြစ်များလေ့ရှိသည့် SIM Invaid...
မိမိဖုန်းကို အသံလေးနဲ့ထိန်းချုပ်ချင်သူများအတွက် KL...
Internet Locke (မိမိခွင့်မပြု တဲ့ Website များကိုအ...
ဘာသာကြီးလေးခု အနှစ်သာရများ E-Book ကလေးဖြစ်ပါတယ်
နယ်မှာ အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ သီချင်း apk လေးပါ
GSM သမားများအတွက် ထူးခြားတဲ့ သတင်းကောင်းလေး
Hot Virtual Keyboard v8.1.5.0 Multilingual ★★
Huawei C8815 ကို Step2update fail & network repa...
Huawei G730-C00 Network Unlock and Myanmar Font In...
ဓါတ်ပုံတွေ convert, resize, လုပ်ပေးနိုင်မယ့် ImBat...
Y535-C00 Root နဲ့ Auto Myanmar Font!
ALLOK VIDEO CONVERTER V4.6.0529 + SERIAL (8.47 MB)...
Android games ငွေခိုးနည်း
Android Live Wallpaper.apk ရေးနည်း
IT နည်းပညာ Ebook
Knowledge for Facebook & G-mail
Knowledge For Android
knowledge For Android apk
Knowledge For Blogger
Knowledge For Computer
Knowledge for Facebook
Knowledge for Facebook.
Knowledge for G-mail
Knowledge for G-Mail -Facebook..
Knowledge for G-Talk
Knowledge For Internet
Knowledge For Network
Knowledge For Phone
Knowledge For Web
pattern lock နဲ့ google account ဖျက်နည်း
Photo Shop ဆိုင်ရာ
screen lock ကိုဖြည်နည်း
ဖုန်း ROOT နည်း
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ဖုန်းနည်းပညာများ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ GSM, WCDMA, CDMA, MEC ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတိုင်းအတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်လိုက်ပြီဆိုတာ နဲ့ အင်တာနက် Setting ထည့်ပေးရမှာ မလွဲဧကန်ပါ။ အဲ့လိုအချိန်ကြရင် မိမိ ကိုင်တိုင် လက်ဆောင်နိုင်အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် … လိုင်း sim card တွေရဲ့ အင်တာနက် setting တွေအပြင် ဖုန်းအမျိုးအစားအလိုက် iphone, Samsung, HTC, Sony, Huawei, Blackbarry, Mobile Windows 7, Mobile Windows 8, Nokia တို့ရဲ့ Internet Setting ထည့်နည်းလေးများကိုလဲ ဖော်ပြထားပေးပါတယ် …
Mec (1500) Card Internet Setting
1.အရင်ဦးဆုံး မိမိ Mobile Phone ရဲ့ Setting ကိုသွားပါ။
2.Wireless & Networks ထဲဝင်ပါ။
3. Mobile networks ထဲကိုထပ်ဝင်ပါ။
4. Access Point Names ကိုဝင်ပါ။
5.Menu Key ( မျဉ်းကြောင်းသုံးကြောင်းထပ်) ကိုနှိပ်ပြီး New APN ကိုနှိ်ပ်ပါ။
6.ကျွန်တော် အောက်မှာပေးထားတဲ့ အတိုင်းဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
Name – Mectel (or) Card
APN - #777
Proxy – ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
Port – ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
Username – mectel@c800.mm (or) card@c800.mm
Password – 123 (or) 12345 (or) card
Server – ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
MMSC – ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
MMS Proxy – ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
MMS Port – ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
MCC – 460
Authentication type – PAP or CHAP (or) CHAP
APN type – ပုံမှန်အားဖြင့် မလိုအပ်ပါဘူး။(Default ကိုသာ ထည့်ပေးပါမယ်။)
Data bearer – မလိုပါ။
Prompt password - #777
APN မပါသော သူများကတော့ PPP Digit မှာ #777 ထည့်ပါမယ်။Connection name တောင်းခဲ့ရင် mectel ပါနော်။
ကဲ…….ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့ IT Bank က စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံး အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျ။အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ရင်လဲ Comment ပေးပြီး မှာထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာ။
GSM, WCDMA Network သုံး Mobile Phone တွေအတွက်
Name – မိမိနှစ်သက်ရာနာမည် တစ်ခုခုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
APN – mptnet
Proxy – ဘာမှမထည့်ပါ
Port – ဘာမှမထည့်ပါ
username – mptnet
Server – ဘာမှမထည့်ပါ
MMSC – ဘာမှမထည့်ပါ
MMS Proxy – ဘာမှမထည့်ပါ
MMS Port – ဘာမှမထည့်ပါ
MMC – 414 လို့ပေါ်နေရပါမယ်
MNC – 01 လို့ပေါ်နေရပါမယ်
APN type – default, supl (ရေးလိုက်ပါ )
APN Protocol = IPv4 ကိုရွေးပါ
အပေါ်က ဖြည့်ခိုင်းထားတာတွေ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Menu key ကိုနှိပ်ပြီး Save (or) Done ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။မပြီးသေးပါဘူးဗျာ။အောက်မှာ တစ်ဆင့် ကျန်ပါသေးတယ်။
1.မိမိ Mobile Phone ရဲ့ Setting ထဲကို ပြန်ဝင်ပါ။
2.Wireless & Networks ထဲကို ထပ်ဝင်လိုက်ပါ။
3.Mobile Networks ထဲကို ၀င်လိုက်ပါဦးဗျာ။
4.Data Enable ဆိုတာလေးကို အမှန်ခြစ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Mobile Phone ရဲ့ Notification Bar အပေါ်နေရာလေးမှာ အပေါ်တက်အောက်ဆင်းပုံစံမျိုး Icon မြှားလေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ GSM Network သုံး Mobile Phone တွေမှာ Internet စတင် အသုံးပြုလို့ရပါပြီဗျာ။(မှတ်ချက် – ဒီ Setting အတိုင်းချိန်လိုက်ရင်လိုင်းဆွဲအားကောင်းမွန်တဲ့ 3G Network ကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
CDMA Network သုံး Mobile Phone တွေအတွက်
5.CTNET နဲ့ CTWAP ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
6.CTNET ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ။ကျွန်တော် အောက်မှာပေးထားတဲ့ အတိုင်းဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
Name – CTNET
APN – #777
Port – ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့
Username – Yekyawphyo@c800.mm (Yekyawphyo ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိကြိုက်တာရိုက်ပါ။)
Password – မိမိ စိတ်ကြိုက် လျို့ဝှက်နံပါတ်တစ်ခုခုကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
Server – ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
APN protocol – IPv4
APN Roaming protocol – IPv4
Bearer – Unspecified
Data Bearer – Package Data
Prompt password – #777
ဒါဆို အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါပြီ။အဲ……ကျွန်တော် တစ်ခု သတိပေးချင်တာကတော့ ဖုန်းတွေက အမျိုးအစားတွေ အများကြီးဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြောတဲ့နည်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေချင်မှပြေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ စိတ်မပျက်ဘဲ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ဥာဏ်စွမ်း ဥာဏ်စလေးတွေနဲ့ ဖြည့်တွေးပြီး ကလိကြပေါ့ဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Internet Setting စတင် ချိန်မယ် ဆိုပါကသမရိုးကျနည်းအတိုင်းပဲ စပါမယ်။ Data Enable ကို On ထားပါမယ်။ထိုနောက် Wireless and Network Settings>Mobile networks>Access Point Names ကို ၀င်ပါမယ်။Menu key ( မျဉ်းလေးကြောင်းထပ် ပုံကလေးပေါ့) ကို နှိပ်ပြီး New APN ကို ရွေးပါမယ်။ ထို့နောက် Name, APN, usernameနှင့် Prompt password ကိုသာ ထည့်၍ Save လုပ်ပါ။ Restart ချပေးပါ။
ပြန်တက်လာလျှင် Internet သုံးလို့ ရပါပြီ။အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Name: MM – MPT Web
The method to do this may be different . If you have better instructions please contact me.
1. From the home screen click on the Blackberry Menu button
2. Then select “Options” – it usually hasaspanner icon.
3. Then “Device Settings”.
4. Then select “Advanced Sysem Settings”.
5. Select “TCP/IP” from the list.
6. Here you will find your “APN Settings”. Make sure the tick-box next to “APN Settings Enabled” is ticked.
7. Once you have done that, just below this you will see “APN:”. This is where you will need to type inasetting. Set the Following APN
8. Click the menu button and select “Save”
For Mobile Windows 7
If you have better instructions please let me know….
Click the Start (menu) button
Choose Settings from the program list
Scroll down and click Cellular
Click on the Edit APN Button
Set: APN: mptnet
For Mobile Windows 8
Tap “Add Internet APN”
Tap APN and type in mptnet
Tap Username and type in mptnet
Tap Password and type in mptnet
Tap “Add MMS APN”
Tap APN an type in
Tap Username and type in
Tap Password and type in
Tap WAP gateway (URL) and type in
Tap WAP gateway port and type in
Tap MMSC (URL) and type in
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး
Copyright 2010 အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ). Designed by : EZwpthemes.
Blogger Template Brought to you by Anshul | Blogger Template Place | Blogger Tutorial